मरे पछि पनि करोडौं कमाउनेहरु ! - Himalayan Kangaroo
मरे पछि पनि करोडौं कमाउनेहरु !
Posted by Himalayan Kangaroo | २५ असार २०७२, शुक्रबार १३:०३ |
एजेन्सी । साधारणतया व्यक्तिको मृत्युपश्चात् उनीहरूको आर्थिक गतिविधिको अन्त्य भएको मानिन्छ । मृत्युवरण गरेका व्यक्तिले बोकेको ऋण वा सम्पत्तिको वारिसहरूबीच जिम्मेवारी सुम्पिनेबाहेक मृतकको नाममा अन्य आर्थिक कारोबार सामान्यतय शून्य नै हुन पुग्दछ । यहाँ यस्ता केही विश्वप्रसिद्ध व्यक्तित्वहरूबारे चर्चा गरिनेछ, जसले आफ्नो मृत्युपश्चात् कैयौं वर्षसम्म पनि बर्सेनी करोडौं डलर आर्जन गरिरहेका छन् ।
तीमध्ये केहीको विवरण यहाँ प्रस्तुत छ :
वाइभेस सेन्ट लोरेन्ट
२० औं शताब्दीका सबैभन्दा प्रख्यात यी फेसन डिजाइनरको २००८ मा ब्रेन क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको हो । फेसनको राजधानी पेरिसको सबैभन्दा प्रख्यात लोरेन्टले पछिल्लो १२ महिनामा ३५ करोड अमेरिकी डलर कमाएका छन् । यो कमाइ उनले पछिल्लो पटक डिजाइन गरेका कपडाको बिक्रिबाट उठेको हो ।
रिचार्ड रोजर्स र ओस्कार ह्यामरस्टिन
रोजर्स र ह्यामरस्टिम अमेरिकाको प्रख्यात सांगीतिक जोडी हुन् । यी दुईमध्ये रोजर्स (मृत्यु १९७९) कम्पोजर हुन् भने ह्यामरस्टिन (१९६०) लेखक र निर्माता हुन् । यो जोडीले अमेरिकामा ब्रोडवे म्युजिकल्स नामक संगीत प्रख्यात बनाएको थियो । इम्याजेम म्युजिक ग्रुपले यी दुईमा निहित सर्वाधिकार खरिख गरेपछि पछिल्लो एक वर्षमा २३ करोड अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । जोडीको ओक्लाहोमा, दि किङ एन्ड आई, साउथ प्यासिफिकलगायत गीत सबैभन्दा प्रख्यात छन् ।
पप संगीतका सम्राट माइकल ज्याक्सनले मृत्युपछि ९ करोड अमेरिकी डलर कमाएको फोब्र्सले उल्लेल गरेको छ । सोनीको सिनेमा ‘दिस इज इट’ मा उनको नाम र चर्चा साथै अन्य व्यापार सम्झौताबाट उनको नाममा सम्पत्ति आएको हो ।
मृत्युपछि संसारभर बढेको एल्बम बिक्री र सञ्चारमाध्यममा बजाइएका गीतबाट ठूलो मात्रामा रोयल्टी पनि उठेको छ ।
रक एन्ड उलका राजा एल्भिसको सन् १९९७ मा ह्दयघातबाट मृत्यु भए पनि पछिल्लो एक वर्षमा आम्दानी आकासिएको छ । अघिल्लो वर्षको ३० लाख डलरबाट बढेर ५ करोड ५ लाख पुगेको छ । यी नायक र गायकसँग जोडिएको व्यापार सम्झौतामा आएको वृद्धिपछि यो सम्भव भएको हो । बार्बी डल (खेलौंना) ले जेलहाउस रक नामक श्रृंखला निकालेपछि प्रिस्लेले सबैभन्दा बढी कमाए । कम्पनी ग्रेसल्यान्डले आगामी वर्ष प्रिस्लेको ७५ औं जन्मोत्सवका अवसरमा अझ बढी आर्जन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
जे आरआर टोल्किन
लर्ड अफ दी रिंग्सका लेखक टोल्किनले पछिल्लो एक वर्षमा ५ करोड डलर कमाएका छन् । उनको पुस्तक प्रकाशनले लर्ड अफ दि रिंग्सबाट सिनेमा बनाएको न्यु लाइन सिनेमालाई रोयल्टी ठगेको आरोप लगाइरहेको छ ।
पुस्तकको बिक्री र सिनेमाबाट आएको रोयल्टीको निश्चित प्रतिशतबाट टोल्किनले सम्पत्ति कमाइरहेका हुन् । यसका साथै उनको अर्को सिर्जना ‘दि होबिट’ २०११ को अन्त्यतिर सिनेमामार्फत बाहिर आयो । यसले थप सम्पत्ति जोड्नेछ ।
यस्तै अन्य कमाउनेहरुको क्रममा विश्वविख्यात कार्टुन कथाकार चाल्र्स स्कल्जको नाम आउँछ । पिन्ट्स शृङ्खलाका कार्टुन कथाका लेखकहरूका रूपमा परिचित चाल्र्स स्कल्जलाई जीवनकालमा यस लेखनले खासै धेरै धन दिन नसके पनि मृत्युपश्चात् भने एक करोड ५० लाख डलर दिन सफल भएको छ ।
अर्का जिम हेन्ड्रिक्स र बब मार्लेको वार्षिक आय पनि १ करोड डलरको हाराहारीमा छन् । अर्का गायक एण्डी बारहोलको मृत्युपश्चात् पनि वार्षिक आय ५० लाख डलरको बीचमा रहँदै आएको छ ।
एकमात्र महिलाको रुपमा रहेकी मर्लिन मुनरो भने चलचित्र अभिनेत्री हुन् । अभिनेत्री मर्लिन मुनरोको मृत्युपश्चात्को मूल आय स्रोतमा उनको नामको प्रयोग लगायत परिधान (फेशन वेयर) हरुमा उनको नाम तथा तस्बिरहरुको प्रयोग गरिए वापत आउने रोयल्टी पर्न आउँछ, जुन प्रतिवर्ष ३० लाख डलरको बीचमा हुने गर्दछ । मृत्युपछि पनि बर्सेनी नियमितरुपमा आइरहने भएकाले त्यस्ता व्यक्तित्वहरुका उत्तराधिकारी र वारिसहरु आरामसँग धन आर्जन गर्न सफल भइरहेका छन् ।
स्रोतः फोबर्स पत्रिका
Previousएक झुप्पा अंगुरको मूल्य १० लाख येन !
Nextअमेरिकाद्वारा नेपाललाई १२२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
विहारका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारको आपत्ति
२० माघ २०७२, बुधबार ०७:०९
१२ कार्तिक २०७४, आईतवार ०२:३२
चीनले बनायो रोबोट पत्रकार (भिडियोसहित)
२४ कार्तिक २०७५, शनिबार ०२:२६